चोकतिर केटा हो… चोकतिर’ ले बदलेको मानबहादुरको जिन्दगी - Sampurnab Khabar
चोकतिर केटा हो… चोकतिर’ ले बदलेको मानबहादुरको जिन्दगी
८ कार्तिक २०७८, सोमबार by सम्पूर्णव
गत असारको दोस्रो साता चितवनको गड्यौलीबाट एक यु’वती अपह’रणमा परेको खबर फैलियो। हराएको नौ दिनपछि गाउँदेखि माथिको जंगलमा उनको श’व फे’ला पर्‍यो। अप’हर’णमा परेको जानकारी दिँदा पनि प्र’हरीले खोजी नगर्दा युवतीको ह’त्या भएको दाबी गर्दै गड्यौ’लीबासी आ’न्दोलित बने। महिला अधिकारकर्मी ‘ज’स्टिज फर सु’जिता भण्डारी’ भन्दै गड्यौली पुगेर आन्दो’लनकारीलाई प्रोत्साहन गर्न थाले। सामाजिक सञ्जालमा पनि प्रशासनको बिरो’ध बढ्दै गयो। अवस्था’ निय”न्त्र’णबाहिर जान थालेपछि प्रशासनले क’र्फ्यू नै लगाउनुपर्‍यो। तर युवतीको ह’त्या भएको कुनै प्रमाण भेटिएन। आ’त्मह’त्या दु’रुत्सा’हनतर्फ मु’द्दा मोडियो।यो घ’ट’नाले गड्यौली चर्चामा त अयो तर नामभन्दा ब’दनाम बढी क’मायो। गड्यौलीबासीलाई स्त’ब्ध बनायो।
त्यही गड्यौली फेरि एक पटक सामाजिक सञ्जालमा खुब चर्चामा छ। यस पटक भने गाउँका एक सामान्य युवकको बोलीले गड्यौली चर्चामा छ, जसले यहाँका स्थानीयलाई असाध्यै खुसी बनाएको छ। यहाँका २० वर्षीय मानबहादुर तामाङले मोबाइलको सेल्फी भिडिओमा स्वतःस्फूर्त बोलेका कुरालाई दर्शकले निकै मन पराएका छन्। भिडिओमा उल्लेख्य कुरा त केही छैनन् तर उनले बनाएको लामो भिडिओको सानो अंश ‘के हो, कहाँ हो? म ह्याँ चोकतिर यार, चोकतिर, चोकतिर केटा हो, चोकतिर म….’ भने केही दिनयता सामाजिक सञ्जालमा निकै हेरिएको छ। युट्युबबाट टिकटक हुँदै फेसबुक र ट्वीटर प्रयोगकर्ताले पनि उनको बोलीको त्यो अंश(चोकतिर)लाई रमाइलो ढंगले प्रस्तुत गरिरहेका छन्। उनले बोलेका शब्दमा गीत बनेका छन्, उनको भाइरल भिडिओसँग जोडेर टिकटक बनाउने क्रम बढ्दो छ। प्रशस्त मिम बनिरहेका छन्।केही सेकेन्डको त्यो भिडिओ टिकटकमा मात्रै २७ लाख भन्दा बढीले हेरेका छन्।
यसरी बन्यो भिडिओ
मानबहादुरलाई पूर्वी चितवनको गड्यौलीमा प्रायःले चिन्छन्। पूर्व-पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको गड्यौली क्षेत्रमा ज्यालादारी काम गर्छन् उनी। मानबहादुर भूतपूर्व भारतीय सैनिक वीरबहादुर तामाङका छोरा हुन्। मानबहादुर सानै हुँदा वीरबहादुर बिते। राजमार्गबाट दुई किलोमिटर पर घर भए पनि उनी घरमा बस्दैनन्। गड्यौली बजार आसपासमा जे काम भेटियो त्यही गरेर गुजारा चलाउँछन्।
भर्चुअल संसारबाट परै रहेका मानबहादुर स्थानीय शिक्षक गणेश लामासँग नजिकिन्थे। बेला-बेलामा भिडिओ बनाएर युट्युबमा पोष्ट गर्ने गणेशले गड्यौलीमा पोल्ट्री फार्म पनि चलाएका छन्। नजिकैको अर्को फार्ममा काम गर्ने मानबहादुरलाई भेट्दा गणेश निकै गफिन्थे। मानबहादुरको बोली, स्वभावले गणेशलाई आकर्षित गरेको थियो। पुरानो, मैलो कपडा, जिंग्रिङ्ग परेको कपालले मानबहादुरको गरीबी झल्काउँथ्यो। गाउँतिर एक्लै बरालिँदै हिँड्ने उनको बानीले बेसा’हरा युवकको परिचय दिन्थ्यो।
गणेश भन्छन्, ‘राम्रो आचरण, नम्र भएर बोल्ने, हाँसेर कुरा गर्ने बानीले मानबहादुरलाई गाउँलेहरू मन पराउँछन्, इमान्दार छ यो केटो भन्छन्। कसैले ल खाजा खाऊ भनेर पैसा दिन्छन्।’
गणेश पनि बेला-बेलामा मानबहादुरलाई रेष्टुरेन्ट लगेर खाजा खुवाउँथे। मोटरसाइकल चढाएर विभिन्न ठाउँ घुम्न लैजान्थे।
एकदिन गणेशले मोटरसाइकल चढेर खेततिर जान लाग्दा मानबहादुरले बोलाए। म पनि जान्छु, फोटो पनि खिचौं भन्न थालेपछि गणेशले मोटरसाइकलमा बसाए। आफ्नो मोबाइल ‘सेल्फी मोड’मा राखेर दिए। रेकर्ड भइरहेको मोबाइल समातेर मानबहादुर जोशका साथ बोल्न थाले, ‘के हो, कहाँ हो? म ह्याँ चोकतिर यार, चोकतिर, चोकतिर केटा हो, चोकतिर म….।
उनी बोलिरहे। कहिले विदेश जाने कुरा, कहिले साथीसंगीसँग भेटघाटको कुरा त कहिले पारिवारिक सम्बन्धका कुरा।
मानबहादुरले बोलेको भिडिओको अघिल्लो केही अंश काटेर गणेशले १८ जुलाईमा टिकटक(किमओङथिङ नामको टिकटक एकाउन्ट)मा पोष्ट गरे। यसलाई टिकटक प्रयोगकर्ताले अत्याधिक मन पराएका छन्। पूर्ण भिडिओ गणेशले ‘सलोम’ नामको युट्युब च्यानलमा पोष्ट गरेका छन्। १९ जुलाईमा पोष्ट गरिएको भिडिओ ३९ हजार ९ सय बढीले हेरेका छन्। यी भिडिओहरू फेसबुक, ट्वीटरतिर पनि पोष्ट भइरहेका छन्।
‘मानबहादुरलाई देख्दा, ऊसँग कुरा गर्दा यसभित्र केही न केही त पक्कै छ जस्तो लाग्थ्यो,’ गणेश भन्छन्, ‘त्यो दिन त उसको मुखमा भगवान् नै बसेका रहेछन् जस्तो लाग्छ। यति धेरैतिर फैलिएछ कि यस्तो त भगवानको बोलीमात्र हुन्छजस्तो लाग्छ।’
मानबहादुरले भिडिओमा बाबुको पेन्सन आउने र त्यो पेन्सन दिदी, भिनाजुले खाने गरेको बताएका छन्। भिडिओमा उनले पटक-पटक विदेश गएर लाइफ बनाउने बताएका छन्।
‘पी’डा धेरै भएर होला काम गर्दागर्दै भक्कानिन्छ, भिडिओमा मनको कुरा भनेको थियो होलाजस्तो लाग्छ’, गणेश भन्छन्, ‘अन्तत: भगवानले उनको कुरा सुनेजस्तो छ।’
आफू पुगेको ठाउँको भिडिओ खिचेर युट्युबमा पोष्ट गर्ने गरेका गणेशले त्यसअघि पनि मानबहादुरको भिडिओ बनाएका थिए।
‘पूर्व-पश्चिम राजमार्गमा रहेको ‘जेब्राक्रस’ बाट मानबहादुरले बाटो काटिरहेको भिडिओ पोष्ट गर्दै सडकको नियमको विषयमा जानकारी गराएको थिएँ। चोकतिर वाला भिडिओ पछिचाहिँ मानबहादुरको खोजी भयो, अहिले उनका सबै भिडिओहरू मान्छेले खोजी-खोजी हेरिरहेका छन्, जे बोल्यो त्यो भाइरल हुन थालेको छ,’ गणेशले सुनाए।
पहिले राखेका भिडिओमा सय, एक सय पचास भ्यू पाउने गरेका गणेश मानबहादुरको त्यो भिडिओमा लाखौं भ्यू आउन थालेपछि छक्क परे। ‘लाइक,कमेन्ट, म्यासेज यति आउँथ्यो कि मेरो मोबाइल नै ह्याङ हुन थाल्यो,’ उनले भने, ‘कुनै भिडिओमा त १२ घन्टा नपुग्दै १ मिलियन भ्यू आयो।’
ती मानबहादुर, यी मानबहादुर
गणेशले सामाजिक सञ्जालमा राखेको भिडिओले मानबहादुरको रूपै बदलिदिएको छ। केही दिनअघिसम्म मैलो शरीर र मैलो कपडामा देखिने मानबहादुर अहिले ‘सफाचट’ देखिन्छन्। त्यो जिंग्रिङ कपालमा रंग दलेर झिल्के देखिका छन्। गगल्स अनि नयाँ जुत्तामा चिटिक्क सजिएका छन् मानबहादुर। बेसाहरा बनेर एक्लै भौंतारिने मानबहादुरलाई यो अवस्थामा देख्दा स्थानीय दंग पर्छन्।
अचेल मानबहादुरलाई सहयोग गर्न भनेर गणेशलाई बर्गेल्ती म्यासेज आउँछन्। मानबहादुरका भिडिओमा सहयोग गर्न तयार रहेका धेरै कमेन्ट भेटिन्छन्।
‘मैले सहयोग गर्छु भनेर आउनेहरूसँग पैसा माग्ने गरेको छैन। प्राप्त सहयोगबाट के गर्ने भन्ने नहुँदासम्म सहयोग मागेर काम पनि भएन,’ उनले भने। तनहुँको एउटा ब्यान्डले गरेको ५ हजार रुपैयाँ सहयोग स्वीकार गरेर उनले मानबहादुरलाई नयाँ कपडा, जुत्ता किनिदिएका छन्।
मानबहादुरका कारण गड्यौलीको नाम जताततै चर्चामा आउन थालेपछि स्थानीय युवाहरू उत्साहित भएका छन्। केही युवाको समूहले ‘कहाँ हो? चोकतिर, चोकतिर, गड्यौली चोकतिर’ लेखिएको टिसर्ट तयार पारी बिक्री गरेर मानबहादुरका लागि सहयोग जुटाएका छन्।
‘आफ्नो ठाउँको नाम नै चर्चामा आउने गरी मानबहादुरको भिडिओ भाइरल भइरहेको छ। यसले हामी गड्यौलीबासीलाई असाध्यै खुसी बनाएको छ,’ टिसर्ट अभियान चलाइरहेकामध्ये एक सचित सेढाईंले भने, ‘हामी अब गाउँलाई चर्चामा ल्याउने मानबहादुरका लागि पनि केही गर्न चाहन्छौं।’
सुरूमा ५० वटा टिसर्टमात्र तयार गरेको भए पनि धेरैतिरबाट माग आएपछि पुर्‍याउन नसकेको उनले बताए।
‘गड्यौली भाइरल भयो भन्दै देश-विदेशबाट फोन आउने गरेको छ,’ उनले भने, ‘सधैँ ओझेलमा परेको हाम्रो गाउँको नाउँ एक्कासी सबैले लिन थालेपछि हाम्रो त खुसीको सीमा नै छैन।’
मानबहादुर अचेल गणेशको घरमा बस्छन्। गणेशलाई अब मानबहादुरलाई आउने सहयोगको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता छ।
‘उसको शारीरिक अवस्था त ठीक छ, काम गरेर खान सक्छ। तर परिवारबाट टाढा हुँदा हो वा के कारणले हो कहिलेकाहीँ मानसिक तनावमा भएजस्तो कुरा गर्छ,’ गणेशले भने, ‘संकलित सहयोगले उसलाई राम्रो अस्पताल लगेर उपचार गराउन पाए हुन्थ्यो जस्तो लागेको छ।’
पहिले अरूले वास्ता नगर्ने गरेका मानबहादुरमा अचेल धेरै मान्छेसँग बोलचाल र घुलमिल हुँदा धेरै सकरात्मक परिवर्तन आइसकेको उनी बताउँछन्।
सामाजिक सञ्जालका कमेन्टहरूमा ‘मानबहादुरजस्ता बेसाहरा युवकलाई बोल्न लगाएर ठूलो हुन खोजेको’ भनेर पनि कमेन्ट आउँदा भने गणेशलाई दु:ख लागेको छ।
‘मेरो स्वार्थ त केही पनि छैन, उसको लाइफ बनोस् भन्ने चाहनामात्र मेरो हो,’ स्थानीय स्तरमा सामाजिक काममा पनि सक्रिय गणेश भन्छन्, ‘तैपनि प्राय:ले राम्रा कमेन्ट गर्नुभएको छ। त्यसैले सकारात्मक कुरालाई ध्यान दिएर सहयोग गर्नुपर्छ भनेर लागेको छु।’
‘मानबहादुर त अहिले सेलिब्रेटी भइसके। उनीसँग टिकटक बनाउनुपर्‍यो भनेर फोन आउन थालेको छ,’ स्थानीय युवा सचितले भने, ‘उनी पनि निकै खुसी देखिन्छन्। खुसी हुँदा नै उनमा धेरै परिवर्तन आएको देखेको छु। बेसाहरा युवाको अनुहारमा यति परिवर्तन ल्याउन सक्नु पनि ठूलो कुरा होजस्तो लाग्छ।’
सबै तस्बिरहरू सौजन्य: गणेश लामा, राजेश घिमिरे ,सेतोपाटी बाट
Prevमहिलालाई प्र’लो’भनमा पारी सामू’हिक ब’लात्का’र गर्ने र भिडिओ बनाउने ३ युवा प’क्राउ, २ फरार
Nextदसैंको टीका लगाएर घर फर्किँदै गरेका तीन बालि काहरु लाई सा मू हिक ब ला त्कारका आ रोपी ८ जना सार्वजनिक